Vola mitentina 1.5 miliara dolara amin'ny Q2 2021 no mitaky famatsiam-bola amin'ny fizahan-tany sy fialamboly
Home » Lahatsoratra farany farany » Fitsangatsanganana an-trano » Vola mitentina 1.5 miliara dolara amin'ny Q2 2021 no mitaky famatsiam-bola amin'ny fizahan-tany sy fialamboly
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Mampitaha ny sandan'ny fifampiraharahana amin'ny sisin-tany amin'ny faritra samihafa eran'izao tontolo izao, dia i Eropa no nitana ny toerana ambony, miaraka amin'ny fifanarahana nambara mitentina 1 miliara dolara tamin'io fotoana io.
650 tapitrisa $ famatsiam-bola ho an'ny FlixMobility no lohalaharana amin'ny lisitra.
Alemana no tampony tamin'ny lisitra tamin'ny vidin'ny fifanarahana tamin'ny $ 745.23 tapitrisa.
Ny firenena ambony amin'ny resaka hetsika famatsiam-bola amin'ny sisintany iraisana amin'ny Q2 2021 dia i Frantsa.
Fampiroboroboana ny indostrian'ny fizahantany sy fialamboly tanteraka $ 1.5bn no nambara manerantany tamin'ny Q2 2021, notarihin'ny famatsiam-bola $ 650m FlixMobility.
Ny sanda dia nanamarika fiakarana 421.4% noho ny telovolana teo aloha ary fiakarana 509.4% raha oharina amin'ny salan'isa efa-telovolana farany, izay nahatratra $ 242.88m.
Mampitaha ny sandan'ny fifampiraharahana amin'ny sisin-tany amin'ny faritra samihafa eran'izao tontolo izao, dia i Eropa no nitana ny toerana ambony, miaraka amin'ny fifanarahana nambara mitentina $ 1bn tamin'io fotoana io. Eo amin'ny sehatry ny firenena, i Alemana no tampon'ny lisitra tamin'ny vidin'ny fifanarahana amin'ny $ 745.23m.
Raha ny volany dia nipoitra i Eoropa ho faritra ambony amin'ny indostrian'ny fizahantany sy ny fialamboly miampita ny fifanarahana ara-bola amin'ny sehatra iraisam-pirenena, arahin'i Asia-Pacific ary avy eo Amerika Avaratra.
Ny firenena ambony amin'ny resaka fifanarahana famatsiam-bola amin'ny sisintany iraisana amin'ny Q2 2021 dia i Frantsa tamin'ny fifanarahana telo, narahin'i Alemana niaraka tamin'ny telo ary India tamin'ny telo.
Tamin'ny 2021, tamin'ny farany, ny fifanarahana famatsiam-bola amin'ny sisin-tany mitentina $ 1.5bn dia nambara manerantany tamin'ny fizahan-tany sy ny indostrian'ny fialam-boly, nanamarika ny fihenan'ny 243.1% isan-taona.